Забур 53 CARS - Nnwom 53 ASCB
1Ɔkwasea ka nʼakoma mu sɛ,
Wɔaporɔ, na wɔn akwan yɛ animguaseɛ.
Baako koraa nni hɔ a ɔyɛ ade pa.
2Onyankopɔn firi soro hwɛ adasamma wɔ fam
sɛ ɔbɛhunu wɔn mu bi a
wɔn nyinaa ayɛ bɔne;
wɔn mu bi nni hɔ a ɔyɛ papa;
4Enti abɔnefoɔ rensua nyansa anaa?
Wɔwe me nkurɔfoɔ sɛdeɛ nnipa di aduane.
Wɔnnsu mfrɛ Onyankopɔn.
5Wɔn na wɔwɔ hɔ a wɔabɔ huboa!
Wɔn ho popo wɔ beaeɛ a ehu nni hɔ.
Onyankopɔn bɛhwete wʼatamfoɔ no nnompe agu;
wobɛgu wɔn anim ase, ɛfiri sɛ Onyankopɔn abu wɔn animtiaa.
6Ao, ma Israel nkwagyeɛ mfiri Sion mmra!
Onyankopɔn bɛsane de ne nkurɔfoɔ agyapadeɛ ama wɔn.
ASCB : Nnwom 53